“Top Finalist ထဲမှာပါမယျလို့ ထငျကွေးပေးခံနရေတဲ့ Manmar Idol Season (4) မှ အမြိုးသမီး ပွိုငျပှဲဝငျမြား – XB Media Myanmar
ပရိသတျအားပေးမှုအခိုငျအမာရှိပွီးဖွဈပွီးTop Finalist ထဲမှာပါမယျလို့ ပရိသတျတှေ ရဲ့ထငျကွေးပေးခံနရေတဲ့ Manmar Idol Season (4) မှ အမြိုးသမီပွိုငျပှဲဝငျတှကေတော့…
အကျစတာဒေါ့သျခငျြးဆုနျ ကတော့ ရနျကုနျအျောဒီရှငျကနေ ပါဝငျယှဉျပွိုငျခဲ့ကာ Golden Ticket ရရှိခဲ့တာပါ။ခဈြစရာကောငျးလှနျးတဲ့ ခငျြးမလေးတဈဦးဖွဈပွီး ပရိသတျ တှကေ ခဈြစနိုးနဲ့ “ဆုနျဆုနျ” လိုချေါလရှေိ့ကွပါတယျ။ဆုနျုဆုနျရဲ့ ပွိုငျပှဲဝငျ ဗီဒီယိုဖိုငျလေး ကတော့ ကွညျ့ရှုသူ(၃)သနျးနီးပါ ရှိခဲ့တဲ့အပွငျ ဒုတိယ ဆုနျသငျးပါရျလို့ ပါ တငျစားရတဲ့ အထိ သူရဲ့ အဆိုစှမျးရညျကတော့ အံ့မခနျးပါပဲ။ဒါကွောငျ့လညျး ပရိသတျတှကေ ဆုနျဆု နျကို Top Finalist ထဲရောကျရှိလာမညျ့ ပွိုငျပှဲတဈဦးဆိုပွီး ထငျကွေး နကွေတာလညျး ဖွဈပါတယျ။
အေးမွဖွူကတော့ ငယျစဉျကတညျးကသီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲတှမှော ဆုတှရေခဲ့တဲ့ အဆိုရှငျ လေးဖွဈခဲ့ပွီး အခုဆိုရငျ ပရိသတျတှရှေကေို့ ပွိုငျပှဲဝငျတဈယောကျအနနေဲ့ ပွနျလညျ ထှကျပျေါလာတဲ့သူလညျးဖွဈပါတယျ။သူမရဲ့အသကျကတော့ (၁၆) နှဈသာ ရှိသေးတဲ့အပွ ငျ မိသားစုကလညျး သူမရဲ့ ဝါသနာကို ပံ့ပိုးအားပေးတာကွောငျ့ အနုပညာအပျေါအားစို ကျကာ ကွိုးစားမယျ့ ပွိုငျပှဲဝငျတဈယောကျလို့ ဆိုရမှာပါ။အသကျငယျငယျလေးနဲ့ ဆှဲဆောငျမှုအပွညျ့ရှိပွီး ကွညျ့လငျပွတျသားလှအသံလေးနဲ့ တညျငွိမျစှာ သီခငျြးတှကေို သီဆိုနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ ပရိသတျတှကေတော့ Top Finalist ထဲမှာပါကိုပါမယျလို့ ထငျကွေး ပေးနကွေတာပါ။
လမငျးအိမျကတော့ လှိုငျကျောမွို့ကနေ လာရောကျယှဉျပွိုငျသူဖွဈပွီး သူကတော့ Myanmar Idol အစီအစဉျနဲ့တော့ သိပျစိမျးလှတဲ့သူမဟုတျပါဘူး။လမငျးလို့ ပရိသတျ တှေ က ခဈြစနိုးချေါတဲ့ သူဟာ Myanmar Idol Season (3) မှာ ပါဝငျယှဉျပွိုငျခဲ့ဖူးပွီး Top (20) အထိ ရောကျခဲ့ဖူးသူလညျးဖွဈပါတယျ။သူကိုတော့ ပရိသတျတှကေ မနှဈကတ ညျးက Finalist ပါမယျလို့ ယုံကွညျ့ခဲ့တာမို့ ဒီနှဈတော့ သခြောပေါကျ ပါမယျဆိုပွီး ထငျ ကွေးပေးကွသလို သူမပါရငျ Myanmar Idol ကိုမကွညျ့တော့ဖူးလို့တောငျဆိုတဲ့အထိ အားပေးကွမျးတဲ့ ပရိသတျကိုပိုငျဆိုငျထားပါတယျ။
ခွူးစဈဟနျကတော့ Miss Face of Beauty Myanmar (2015)ဆုကွီးကိုရရှိထားတဲ့ အလှမယျတဈယောကျဖွဈသလို မျောဒယျလျ၊မငျးသမီးတဈယောကျဖွဈတာကွောငျ့ နာမညျရပွီးသားလူတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။ မျောဒယျလျ၊မငျးသမီးတဈယောကျအနနေဲ့ ပရိသတျအခိုငျအမာရရှိထားတဲ့ ခွူးစဈဟနျဟာအခုလို သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲ့ကွီးကို ဝငျရော ကျယှဉျပွိုငျတဲ့အခါမှာလညျး ပရိသတျရဲ့အားပေးမှုအခိုငျအမာထပျမံ ရရှိပွီး သားလို့ လညျးဆိုရမှာပါ။ဒီပှဲကိုပါဝငျလာတာကွောငျ့ ဝဖေနျမှုတှရှေိသလို အားပေးတဲ့ပရိသ တျက တော့ တျောတျောလေးကိုမြားပွီး ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ သူရဲ့အဆိုပါရမီကွောငျ့ ပရိသတျ တှရေဲ့Top Finalist ထဲမှာပါမယျလို့ ထငျကွေးပေးခံနရေတာလညျးဖွဈပါတယျ။
ကဲ CeleGabar ပရိသတျကွီးရော ဘယျသူကိုအကွိုကျဆုံးလဲ၊သူတို့သာ Finalistပါရငျ အားပေးကွမှာလား။. DarDar-CeleGabar&Source:Celegabar.com
“Top Finalist ထဲမှာပါမယ်လို့ ထင်ကြေးပေးခံနေရတဲ့ Manmar Idol Season (4) မှ အမျိုးသမီးပြိုင်ပွဲဝင်များ ”
ပရိသတ်အားပေးမှုအခိုင်အမာရှိပြီးဖြစ်ပြီးTop Finalist ထဲမှာပါမယ်လို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ထင်ကြေးပေးခံနေရတဲ့ Manmar Idol Season (4) မှ အမျိုးသမီပြိုင်ပွဲဝင်တွေကတော့…
အက်စတာဒေါ့သ်ချင်းဆုန် ကတော့ ရန်ကုန်အော်ဒီရှင်ကနေ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကာ Golden Ticket ရရှိခဲ့တာပါ။ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ချင်းမလေးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေက ချစ်စနိုးနဲ့ “ဆုန်ဆုန်” လိုခေါ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ဆုန်ုဆုန်ရဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ ကြည့်ရှုသူ(၃)သန်းနီးပါ ရှိခဲ့တဲ့အပြင် ဒုတိယ ဆုန်သင်းပါရ်လို့ ပါ တင်စားရတဲ့အထိ သူရဲ့ အဆိုစွမ်းရည်ကတော့ အံ့မခန်းပါပဲ။ဒါကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေက ဆုန်ဆုန်ကို Top Finalist ထဲရောက်ရှိလာမည့် ပြိုင်ပွဲတစ်ဦးဆိုပြီး ထင်ကြေးပေးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အေးမြဖြူကတော့ ငယ်စဉ်ကတည်းကသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဆုတွေရခဲ့တဲ့ အဆိုရှင်လေးဖြ စ်ခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် ပရိသတ်တွေရှေ့ကို ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြန်လည်ထွက်ပေါ် လာတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့အသက်ကတော့ (၁၆) နှစ်သာရှိသေးတဲ့အပြင် မိသားစု ကလည်း သူမရဲ့ ဝါသနာကို ပံ့ပိုးအားပေးတာကြောင့် အနုပညာအပေါ်အားစိုက်ကာ ကြိုးစား မယ့် ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်လို့ ဆိုရမှာပါ။အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိပြီး ကြည့်လင်ပြတ်သားလှအသံလေးနဲ့ တည်ငြိမ်စွာ သီချင်းတွေကို သီဆိုနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေကတော့ Top Finalist ထဲမှာပါကိုပါမယ်လို့ ထင်ကြေးပေးနေကြတာပါ။
လမင်းအိမ်ကတော့ လွိုင်ကော်မြို့ကနေ လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်သူဖြစ်ပြီး သူကတော့ Myanmar Idol အစီအစဉ်နဲ့တော့ သိပ်စိမ်းလှတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။လမင်းလို့ ပရိသတ်တွေက ချစ်စနိုးေ ခ်ါတဲ့ သူဟာ Myanmar Idol Season (3) မှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ဖူးပြီး Top (20) အထိ ရောက်ခဲ့ဖူးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကိုတော့ ပရိသတ်တွေက မနှစ်ကတည်းက Finalist ပါမယ်လို့ ယုံကြည့်ခဲ့တာမို့ ဒီနှစ်တော့ သေချာပေါက် ပါမယ်ဆိုပြီး ထင်ကြေးပေးကြသလို သူမပါရင် Myanmar Idol ကိုမကြည့်တော့ဖူးလို့တောင်ဆိုတဲ့အထိ အားပေးကြမ်းတဲ့ ပရိသတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
ခြူးစစ်ဟန်ကတော့ Miss Face of Beauty Myanmar (2015)ဆုကြီးကိုရရှိထားတဲ့ အလှမယ်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို မော်ဒယ်လ်၊မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် နာမည်ရြ ပီးသားလူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မော်ဒယ်လ်၊မင်းသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ် အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ ခြူးစစ်ဟန်ဟာအခုလို သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ့ကြီးကို ၀င်ရောက်ယှဉ် ပြိုင်တဲ့ အခါမှာလည်း ပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုအခိုင်အမာထပ်မံရ ရှိပြီးသားလို့လည်းဆိုရ မှာပါ ။ဒီပွဲကို ပါဝင်လာတာကြောင့် ဝေဖန်မှုတွေရှိသလို အားပေးတဲ့ပရိသတ်ကတော့ တော်တော်လေး ကို များပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ သူရဲ့အဆိုပါရမီကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့Top Finalist ထဲမှာပါမယ် လို့ ထင်ကြေးပေးခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရော ဘယ်သူကိုအကြိုက်ဆုံးလဲ၊သူတို့သာ Finalistပါရင် အားပေးကြမှာလား။. DarDar-CeleGabar&Source:Celegabar.com
မွဇတျကားရိုကျကူးရာမှ ပွငျးထနျ တဲ့ ထိခိုကျဒဏျရာတှရေခဲ့တဲ့ သငျ ဇာ ဝငျ့ကြျော